Ahoana no hiatrehana ny tsy fandriam-pahalemana ary handresena ny vokany - An-Tsaina
Ahoana no hiatrehana ny tsy fandriam-pahalemana ary handresena ny vokany
Ny olona tsirairay any dia miaina tsy fandriam-pahalemana amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainany. Na olona matoky tena aza!
Ny sasany mahay manafina azy io, ny hafa kosa mitsiky ary mahazaka azy, fa ny sasany kosa mametraka ny asa handresena azy.
Ara-dalàna ary tsy maninona ny mahatsapa tsy fahatokisan-tena indraindray. Manomboka ny olana rehefa mitazona anao tsy hanenjika ny karazan'aina tianao hananana sy ny maha-olona tianao ny tsy fahatokisan-tena.
maninona ny vadiko no tezitra amiko foana
Tsy maintsy ianao no manapa-kevitra hamantatra ny olana, manangana drafitra hiatrehana izany, ary manomboka miasa mandresy izany.
Ahoana no anaovanao an'izany?
Fantaro ny tsy fandriam-pahalemana ary tadiavo ireo fakany
Ny iray dia tsy maintsy mamantatra izay olana iray alohan'ny hanombohantsika mamaha azy.
Voalohany, tokony hametraka ny fahatsapana tsy azo tsapain-tanana amin'ny teny mivaingana kokoa isika. Olona miteny hoe: 'Tsy mahatoky tena aho.' tsy tena milaza zavatra azo andraisana andraikitra.
Inona avy ireo fahatsapana manodidina izany tsy fandriam-pahalemana izany? Mitebiteby ve ianao? Matahotra? Mahatsiaro ho tsy mendrika sa tsy mendrika? Toa anao tsy afaka matoky ? Tahaka anao tsy ampy tsara ? Tsy ampy fahombiazana? Tsy mandroso haingana?
Inona ireo fihetseham-po sy eritreritra manokana hanananao amin'ny tsy fandriam-pahalemana?
Ny famantarana ny fihetsem-po manodidina ny tsy fandriam-pahalemana dia ampahany iray amin'ilay fampitahana. Ny ampahany iray hafa dia ny mamantatra hoe avy aiza ireo fihetsem-po ireo. Raha vantany vao azonao izany dia azonao atao ny manomboka manafika ny fototry ny tsy fandriam-pahalemana mandra-pandresinao azy.
firenena manana fanjakana manjaka
Ianao ve mampitaha ny dianao amin'ny an'ny hafa ? Ny namanao na ny fianakavianao ve manohana na manakiana ny maha-ianao anao sy ny lesokao?
Raha ny marina, ny tsy fandriampahalemana marobe dia miorina amin'ny fahatsapana fa manana ny tenantsika isika izay noforonina sy nohamafisin'ny olona hafa.
Raha lehibe ao an-trano ianao dia ihomehezana ianao nambaniana ho an'ireo zavatra ankafizinao, ireo zavatra reharehanao, ireo zavatra vitanao - avy eo tsy hahatsapa fahasambarana ianao na hihavana amin'izy ireo rehefa mihalehibe.
Toy izany koa, raha manana namana, mpiara-miasa na vady ianao izay mahatonga anao hahatsapa ho ambany noho ny fahamendrehana, korontana na tsy ilaina - dia tsy hahita fahasambarana sy fiadanam-po amin'ny fiainanao andavan'andro ianao.
Ny olon-kafa dia te-hametraka ny sarin-tsainy manokana amin'izay heveriny fa tokony hahatongavanao eo aminao, saingy tsy izany no safidiny. Anao iny.
Ary raha efa ela no nosedraina ireo fitantarana ireo ianao dia manomboka mampiditra azy ireo bebe kokoa hatrany mandra-pinoanao fa izany tokoa ianao. SAINGY io dia tsy. Tsy iza no lazain'ny olon-kafa na mieritreritra anao.
Fomba hanatsarana ny fahitana tena sy ny tsy fandriam-pahalemana
Raha vantany vao hitanao ny antony mahatonga ny tsy fahatokisanao, inona no azonao atao amin'izany?
ahoana no hahalalana raha tena tianao ny lehilahy iray
1. Fanamafisana - Ny fanamafisana tsy tapaka sy ny fanaovana hatsaram-panahy amin'ny tenanao dia fomba iray mahomby hanovana ny fitantarana ao anaty anao.
Manorata kabary fohy momba ny pep anao, tadidio ary avereno aminy tsy tapaka izany, indrindra rehefa mahatsiaro ho ambany ianao na tsy matoky tena.
2. Famelan-keloka - Olombelona ianao! Handray fanapahan-kevitra ratsy ianao, hanao fahadisoana, hanao hadalana indraindray. Toy izany ihany. Ny olon-tokana rehetra dia manao satria isika dia noforonina kilema avokoa.
Ianao dia tokony mamelà ny tenanao rehefa manao fahadisoana ianao ary manapa-kevitra ny hanao tsara kokoa amin'ny manaraka. Ary rehefa manapa-kevitra ny hamela ny tenanao ianao dia mila avelao handeha izy, fa aza honina eo .
3. Fahatsiarovan-tena - Ny fahatsiarovan-tena dia ny fifohazana sy ny fahatsiarovan-tena amin'ny fotoana fa tsy ny zava-nitranga omaly, fa tsy ny fieritreretanao ny ho avy rahampitso.
Tokony ho fantatsika fa samy manao dia lavitra isika rehetra, ka tsy afaka hiantraika amin'ny toerana misy antsika fotsiny. Ny lesoka nataonao omaly dia tsy mila mamaritra ny toerana misy anao anio, izay halehanao rahampitso.
Ny ankamaroan'ny entana entina miantraika amintsika ankehitriny dia vokatry ny ratra tsy nety sitrana tamin'ny lasa sy ny tahotra ny ho avy.
Vakio ity rehefa mahatsiaro ho tsy milamina ianao ary tsy fantatrao ny antony
Antony 12 Mahatsapa fihetseham-po be loatra ianao tato ho ato (Mba tsy tokony hiraharaha anao)
Karazana sakaiza 9 tokony hosokafana (tsy misy mahatsapa ratsy amin'izany)
4. Ankalazao ny zava-bita - Fahita matetika ny olona mieritreritra ireo zavatra tsy mandeha ary mamono ny zavatra vitan'izy ireo. Mila misy fandanjalanjana eto.
Tsy maninona ny manenina na miaina fanaintainana kely ho an'ny lesoka na hadisoana taloha, fa mila miaiky ihany koa isika ny zavatra tsara izay misy eo amin'ny fiainantsika.
ohatrinona ny sandan'ny moneybagg anao?
Ny zava-bita dia zavatra mendrika ekena sy ankalazana, satria fanamafisana tsara fa sarobidy ianao sy ny anjara birikinao.
5. Tsy mahomby bebe kokoa - Toa ratsy izany, sa tsy izany? Ny tsy fahombiazana dia tsy ratsy. Ny tsy fahombiazana dia ampahany fotsiny amin'ny fahombiazana amin'ny ankapobeny .
Vitsy monja ny olona tsara vintana eto amin'izao tontolo izao izay manindrona tanteraka izay nokasainy hatao tamin'ny andrana voalohany. Ary amin'ny ankamaroan'ny fotoana, tsy mitranga izany.
Ny olona mahomby dia ireo olona manandrana zavatra tsy tapaka, ary rehefa manao izany dia tsy mahomby. Fa tsara izany! Satria rehefa manandrana zavatra bebe kokoa ianao ary miaina tsy fahombiazana, dia tsapanao fa tsy mbola faran'ny izao tontolo izao mihitsy. Ampahany iray amin'ny dia amin'ny ankapobeny ihany io.
Manome ny toerana manokana anao…
Misy fomba fiteny taloha milaza ny vokatry ny hoe: 'Ianao no totalin'ny olona dimy andanianao fotoana betsaka.'
Araho maso ny boriborinao manokana. Topazo maso tsara sy lava ireo olona nanodidina anao ary alao antoka fa mpandray anjara tsara amin'ny fiainanao sy ny fiadananao izy ireo.
Raha manodidina anao ny olona ratsy fanahy miresaka aminao izy, manompa anao, ary manimba ny zavatra mahaliana anao sy ny fientanam-ponao, dia hanana fotoana sarotra kokoa ianao amin'ny fananganana toe-tsaina tsara.
fizarana vaovao an'ny dragon ball super
Ny fanaovana izany fanaraha-maso izany dia zavatra sarotra atao, indrindra raha tsapanao fa ireo olona antsoinao hoe namanao akaiky indrindra na ny vadinao dia manimba mivantana ny fiainanao, ny fahaizanao mivoatra ary ny fahombiazanao.
Mampalahelo fa ny fizotran'ny fanatsarana tena indraindray dia midika fa tsy maintsy be loatra ny olona manodidina anao. Betsaka ny olona eto amin'izao tontolo izao izay tsy afa-po tanteraka amin'ny fahantrana sy tsy faly satria izany no nahazatra azy ireo, ary mampatahotra ny eritreritra ny hiova .
Mety hahatsapa ianao fa toa te-hanome aingam-panahy na hitondra ireo olona ireo miaraka aminao, ary azo inoana fa mety misy ny sasany amin'izy ireo mety maniry hiara-maniry aminao, fa aza gaga raha tsy manao izany izy ireo.
Aza gaga raha maneso na mametra-panontaniana izy ireo hoe maninona ianao no manelingelina. Aza gaga raha manandrana manambany anao izy ireo, miantso anao ho adala na ratsy kokoa, ary manandrana manao anao ho ratsy amin'ny tenanao.
Matetika ny olona dia manao izany ho toy ny rafitra fiarovana satria ny fahitana olon-kafa mihatsara dia fampatsiahivana ny lesoka, ny tsy fahombiazany ary ny fisalasalany diso. Ary tsy manandrana mamaly an'izany amin'ny fomba mahasalama sy ho tsara kokoa, dia reraka fotsiny izy ireo ary misafidy ny ho rendrika amin'ny fahantrany manokana.
Ny toetra sarotra amin'ny fanatsarana ny tena…
Ny tanjon'ny fanatsarana tena, ny fandresena ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fitadiavana fahasambarana bebe kokoa dia avo lenta ary mety ho sarotra tokoa.
Ny fiezahana manala ny fihetseham-pontsika manokana, ny antony mahatonga antsika hanana ary ny antony anaovantsika ireo zavatra ataontsika dia sarotra.
Raha olona manana tantara mampivadi-po ianao na nifangaro tamin'ny olona misy poizina hatry ny ela dia mety mila fanampiana bebe kokoa noho ny lahatsoratra fanatsarana tena amin'ny Internet ianao.
Diniho ny mitady mpanolotsaina voamarina raha mahatsapa ianao fa very na tsy azonao antoka ny fomba hirosoana. Na dia tsy mahavita ny asa ho anao aza izy ireo, ny mpanolotsaina voamarina dia afaka mitarika ho mpitari-dalana mahomby amin'ny fitetezana ny lalanao na dia ireo zavatra sarotra mety niainanao sy niainanao aza.
tsara indrindra amin'ireo tanora zandriny indrindra 2019
ahoana no anontany an-dehilahy hoe ho aiza ny raharaha
nahoana no zava-dehibe ny fanajana
karatra lalao fahaveloman'ny wwe tafavoaka velona 2016
zavatra hafahafa hatao ao an-trano